Fanantenana amin’ny hoavy
Manelingelina ireo olona tsy mino ny fandraisan'ny mpaminany ny fanambarana mialoha avy amin'Andriamanitra ny nilazan'i Isaia mazava ny anaran'i Kirosy. Raisin'izy ireo eo anatrehan'izany ny petra-kevitra manambara fa misy mpaminany hafa "Isaia faharoa" velona tamin'ny andron'i Kirosy, ary io mpaminany io no nanoratra ny Isa. 40 hatramin'ny toko faha-66. Heverin'izy ireo ho "notsofana", araka izany, ny bokin'i Isaia, tahaka izay noheverina hatramin'izay ho natao tamin'ilay mpaminany ihany (jereo ny Heb. 11:37).
Tsy misy fotoana ho an'ny asan'ny devoly 2 Pet. 3:11,12
Tsy misy anefa ny tantara manamarina ny fisian'ny "Isaia" faharoa. Raha nisy izany dia hafahafa ny tsy filazan'ny Baiboly izany, noho ny maha-zava-dehibe ny hafatra entiny sy ny asasorany miavaka. Na ny sora-tanan'ny Baiboly tranainy indrindra aza, ny horonan-taratasin'i Isaia avy amin'ny "Qumran", dia tsy ahitana fiatoana manelanelana ny Isa. 39 sy 40, izay mety maneho fiampitana ho amin'ny asasoratry ny mpanoratra iray hafa.
Tsy miova ny hafatra fototra ambaran'i Isaia manerana ny boky nosoratany: matokia ´ marina, ao anatin'izany ny fitokiana amin'ilay Mpanafaka Mesiany, fa aza miankina amin'ny fahefana hafa. Marina ny fanambaran'ireo manam-pahaizana momba ny Baiboly amin'ny filazana fa miresaka momba an'i Asiria ny Isa. 1-39; ny toko faha-40 hatramin'ny fiafaran'ny boky kosa dia miresaka momba ny fotoana hitoeran'ny vahoakan'Andriamanitra ho babo any Babilôna. Marina tokoa fa manasongadina fitsarana ny Isa. 1--39 ary fampiononana kosa no asongadin'ny Isa. 40--66. Maro koa anefa ny fampiononana sy toky omen'Andriamanitra ao amin'ireo toko any aloha, ary ny toko aty aoriana toy ny Isa. 42:18-25 sy ny Isa. 43:22-28 ary ny Isa. 48:1-11 dia miresaka ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra an'i Joda noho ny nahafoizany Azy. Ny fanambarana mialoha nataon'i Isaia momba ny fampiononana dia maneho fa hisy ny fahoriana eo anelanelan'izany.
Na dia niatrika loza mahatsiravina vokatry ny fahotan'ny vahoaka aza ny firenen'i Joda dia tsy nanary toky ny sasany tamin'izy ireo. Nifikitra tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra izy ireo, toy izay hita ao amin'ny Lev. 26:40-45. Vakio tsara ireo andalan-teny ireo. Mipetraha amin'ny toeran'ireo Hebreo velona taorian'ny nandresen'ny Babilôna ny fireneny. lnona ny fanantenana hitanao ao amin'ireo teny ireo?
lnona ny fitsipika ara-panahy hitanao ao amin'ireo andalan-teny ao amin'ny Levitikosy ireo? Inona no ambaran'i Jehôvah amin'ny lsiraely eto? Ahoana no fiasan'izany fitsipika izany eo amin'ny fiainantsika manokana?